Asan-jiolahy sy fampihorohoroana – Toamasina : voasambotra i Papi sy Jao mpanapaka tanan’olona | NewsMada
Asan-jiolahy sy fampihorohoroana – Toamasina : voasambotra i Papi sy Jao mpanapaka tanan’olona
Ankoatra ireo jiolahy efa-dahy malaza ratsy amin’ny vaky trano, fanendahana sy fanaovana sinto-mahery voasambotry ny polisy tao Ambohijafy, Toamasina, ny asabotsy teo, ihany koa ireo roa lahy, Papi sy Jao, tompo-marika tamin’ny fanapahana ny tanan’ilay raim-pianakaviana, nahoraka be tao Andranomadio, ny 11 febroary lasa teo.
Na teo aza ny fanakianana nahazo ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fandriampahalemana miseholany ao Toamasina, nisy ny ezaka vitan’ny polisy ao Tanambao Bazarikely notarihin’ny lehibeny, ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys ka nahatrarana olona enina tompon’antoka tamin’ilay raharaha fanapahana tanana raim-pianakaviana iray nandeha môtô. “Ny andron’ny alakamisy taorian’ny fahatapahan’ny tanan’ilay raim-pianakaviana hamonjy fodiana ao Andranomadio, jiolahy enina indray voasambotra. Ny roa amin’izy ireo no tompon’antoka tamin’ny fanapahana ny tanan’ilay raim-pianakaviana, ny efatra kosa tamina raharaha vaky trano sy fanendahana ao Andranomadio ihany”, hoy ny Kaomisera Razafindahy nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly tao Toamasina. Manodidina ny 18-22 ny salan-taonan’ireo jiolahy nahavanon-doza ireto.
Niaiky rahateo ry zalahy nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy. Voalaza fa avy niasa ary hamonjy fodiana ao Andranomadio ilay raim-pianakaviana, ny herinandro teo no sendra ireo jiolahy ka nokapain-dry zalahy ny antsibe avy hatrany ny tanany teo ambony môtô. Nihintsana teo amin’ny arabe mihitsy ny tanan’ilay niharam-boina ary mbola afa-nandray ny tanany ary nampiditra izany tao anaty môtô ilay raim-pianakaviana niharam-boina.
Jiolahy roa noraisim-potsiny
Fa tsy afa-nihetsika intsony koa ireo jiolahy roa namaky tranon’olona tao Ambohijafy, ny asabotsy teo. Voalazan’ny polisy fa môtô sy entana maromaro no tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Malaza ratsy amin’ny fanendahana miharo sinto-mahery ao Bazarikely Toamasina ry zalahy ireto, raha ny tatitra nampitain’ny polisy.
Nilaza ny polisy fa efa mpamerin-keloka ny ankamaroan’ireto jiolahy saron’ny polisy ireto.
Ahina ho faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ny ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana manoloana ity asan-jiolahy ity. Misy tokoa araka izany, ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, saingy voasambotra ny jiolahy dia tonga indray ny manaraka.
2 r&eacuteponses à "Asan-jiolahy sy fampihorohoroana – Toamasina : voasambotra i Papi sy Jao mpanapaka tanan’olona"
Abdoul Kafard 16/02/2016 à 09:32
tanana solon’ny tanana tapaho koa ny azy
Ralay 16/02/2016 à 10:11
Tokony mba tapahana kely koa ny tanan’izy roa lahy mba hahatsapany ny fangidin’izany tapa-tanana izany.